Ihe mgbochi CM Company Company - Jiande Chaomei Daily Chemicals Co., Ltd.
Na-agba ọsọ MASdị MASK
IKU Ydị MASK
Mgbapu nwere ike ikwuputa
Ihe nkpuchi nke CM
AKW CMKWỌ AKW CompanyKWỌ Companylọ Ọrụ CM
Lin Jinxiang, onye guzobere Chaomei - onye isi ụlọ na ngalaba nke iku ume
Vice President of China Textile Business Association, Onye isi oche nke Zhejiang Safety and Health Protection Products Industry Association, Onye isi oche nke Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd.
Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd. bụ a ghọtara "ọlaedo ihe ịrịba ama" na ubi nke akụkụ okuku ume na nchekwa na anụ ụlọ ọrụ mkpuchi ụlọ ọrụ. Mgbe ihe karịrị afọ 40 nke ịrụsi ọrụ ike, n'okpuru nduzi nke Onye isi oche Lin Jinxiang, Chaomei na-ebute ụzọ nke ngwaahịa ndị yiri ya n'usoro nke ụlọ ọrụ, ikere ahịa na mmetụta ika, ma sonye na nke atọ nke "Emere na Zhejiang" ọkọlọtọ drafting nkeji, "PM2.5 echebe Masks" otu ọkọlọtọ Nwa unit, na drafting unit nke mba ọkọlọtọ maka igbochi particulate okwu iku ume. North Korea enwetabeghi ikike ikike imepụta ihe nke ụlọ ọrụ mba, kamakwa akwụkwọ ikike ahụike na ahụ ike. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ụlọ ole na ole nwere ike ịmepụta ihe mkpuchi ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ndị nkịtị, na ahụike.
N’okporo ụzọ ahụ, Lin Jinxiang na-eche na e nwere ụzọ dị ogologo ọ ga-aga, ọ maghịkwa ịdalata na ntakịrị ihe, na-eduga ụlọ ọrụ ahụ iji obi ike bilie na-ebute ụzọ na akụ na ụba ahịa ma gbanwee. N'oge na-adịbeghị anya, onye editọ nke China Labour Insurance Network mere mkparịta ụka nkịtị na Onye isi oche Lin Jinxiang.
Nwere ike iburu owu ọmụma, nwere ike ijide nrọ
Prakpụrụ omume rụrụ arụ nke Lin Jinxiang sitere na ahụmịhe ya gara aga. N’ileghachi anya azụ n’afọ 1978, onye ọrụ ugbo ahụ na-eto eto malitere azụmahịa ya site n’ire ụgbọala nke nkụ maka yuan 30 na ịgbazinye ego yuan 20. N'ime afọ 10, ọ bụ onye isi na onye na-ere ahịa, na-ere mops, uwe a kpara akpa, yana ndị na-ahụ maka ngwaike. Iji chekwaa ego na mbido azụmahịa ahụ, Lin Jinxiang na-ewere achịcha osikapa nne ya mere oge ọ bụla ọ gara igboju agụụ ya. Ọgwụgwọ kachasị mma n’abalị bụ ụlọ nkwari akụ maka yuan ise n’abalị ọ bụla, ọ ga-anọkwa ebe ahụ. Imirikiti ebe a na-ebugharị ya bụ ugwu, dị egwu ma dị egwu. Lin Jinxiang amaghị otú ọsụsọ na-agba n’okporo ụzọ ahụ dị ogologo. N’okwu nke aka ya, onweghị ihe dị mfe ime n’ụwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ iyi okpueze, ị ga-ebu ụzọ buru ibu ahụ.
Ihe karịrị afọ 20 bụ afọ iji nwee obi ike ịrụsi ọrụ ike. Lin Jinxiang kwuru, sị: "Etufuru m mgbe m nwetara ihe ndọghachi azụ, mana echetụbeghị m ịhapụ. Ugbu a enwere m nnukwu mpako ịtọlite ​​usoro ntụle ọrụ ụlọ ọrụ maka ụmụaka nwere ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike. Echere m na ndị ọchụnta ego ọ bụla nwere ịnụ ọkụ n'obi Azụmaahịa m A na-agba mbọ ka enwere ike ịgafe, ma ugbu a, ahụrụ m ụmụ m nwoke abụọ na-arụsi ọrụ ike maka akara Korea-American ka mma. Obi dị m ezigbo ụtọ.
N’ikwu okwu banyere ihe isi ike n’oge gara aga, Lin Jinxiang enweghị nnukwu mmụọ, “N’ezie, ọgbọ anyị a nwere isi ọma. Mgbe emezigharị na imeghe, amụma mba na-agba azụmaahịa ume, yabụ enwere m ohere ịme ihe m chọrọ. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ inwe ihe ịga nke ọma, nke mbụ, anyị ga-amụta ịtachi obi n'ihe isi ike, ịnagide owu ọmụma, na ijide nrọ. "
Mezuo ọrụ mmekọrịta gị na ikwu maka mkpuchi ọrụ
Na 1996, Lin Jinxiang malitere ịmalite ụlọ ọrụ iji mepụta ihe nkpuchi n'okpuru iwebata enyi, mana na mbido, ngwa ahịa ahụ karịrị akarị n'ihi ahịa adịghị mma. N’ịhụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe isi ike gbasara ego, ezinụlọ ya jiri ego ha chebere kwado ya. Nke ahụ bụ, site n'oge ahụ gaa n'ihu, Lin Jinxiang enweghị nkụda mmụọ n'agbanyeghị nnukwu nsogbu siri ike zutere: Dome ngwaahịa dị mma na ezigbo ụlọ ọrụ bụ nlọghachi kachasị mma na ezinụlọ ya.
"Na mbido, echere m naanị na ịme azụmahịa mkpuchi ọrụ nwere ike ịkwado ezinụlọ, mana site na ịme ya, ahụrụ m ụlọ ọrụ a nke ọma na nke ọma anya. Dịka okwu a ma ama ugbu a, a na-akpọ ya echefubeghị ebumnuche mbụ. Iche maka ya ugbu a, isi ike bụ mgbe ụfọdụ ihe dị mma. N'ihi gị ịdị uchu, ụfọdụ echiche ga na-adị gị n'uche mgbe niile. Amaghị m ụdị mkpụrụ ọ ga-amị ... "Lin Jinxiang nwere mmasị ịbanye n'ime nyocha na nwere echiche puru iche nke ya na ahia. O nwere nraranye nye oru. Na "uche" emeela ya, o meela Korea na America taa.
SARS kpụ ọkụ n’ọnụ n’afọ 2003, akụkọ banyere “Sera Respiratory Dysfunction (SARS)” pụtara n’ọtụtụ ebe n’ụwa. Indonesia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, United States, Canada na mba ndị ọzọ enweela ọtụtụ ikpe nke SARS n'usoro. Na 2004, Ngalaba nke kemistri ọgwụ nke National Development na Reform Commission kpebiri na North Korea na United States kwesịrị ịbụ ndị mbido ngwa ngwa ihe enyemaka na-echekwa ihe enyemaka na mba ahụ (North Korea na United States bụ ihe mberede mba. ihe ndozi ihe maka afọ iri anọ na anọ). Ruo taa, North Korea na United States ka nwere ọrụ maka inye mba ahụ. Ọrụ dị mkpa nke enyemaka enyemaka mberede. Lin Jinxiang ka na-echeta n'ụzọ doro anya ebe ụgbọ elu pụrụ iche na-ebuga masks 200,000 na tolọ Ọgwụ Beijing Xiaotangshan. N'ịhụ ebe a na-ekwu okwu ogbako ahụ, ndị isi ndị isi na ndị ọrụ niile yi ihe mkpuchi North Korea na America, Lin Jinxiang nwere mmetụta na nke mbụ ọrụ dị mma nke onye ọrụ mkpuchi ọrụ.
N'ime oge SARS, North Korea na United States siri ọnwụ na ha agaghị ebili penny ma jiri obi ike na-ebuga ihe nkpuchi na ebe a kacha chọọ ha. Nke a meriri otuto sitere n'aka ndị ọrụ ibe na ụlọ ọrụ ahụ wee guzobe ọnọdụ ndu nke North Korea na United States na ụlọ ọrụ mkpuchi ọrụ.
Mgbe SARS gasịrị, North Korea na United States lekwasịrị anya karị iji mezuo ọrụ mmekọrịta ọha na eze: Ma ọ bụ ala ọma jijiji Wenchuan, mgbawa na Tianjin Port, ma ọ bụ ntiwapụ nke ọrịa nnụnnụ, North Korea na United States enyela nchebe na-enweghị ume n'efu ngwaahịa na mpaghara ọdachi ahụ n'oge mbụ. N'otu oge ahụ, ndị mara mma nke North Korea na-arụkwa ọrụ n'ọtụtụ ọrụ mmekọrịta dịka olu ọma nke Jiande City, nri abalị maka ndị agadi na Ememme Double Ninth, ego nke Spring Breeze Action nke Jiande City Sanitation Center, the inye ego ego nke ụmụ akwụkwọ kọleji nọ ná mkpa, yana nkwado nke gọọmentị ime obodo iji wuo ogige ntụrụndụ maka ndị bi n’ime obodo. .
Mee ka akara ahịa dị elu site na teknụzụ ọhụụ
Lin Jinxiang kwuru, "Ọ bụrụ na ịnweghị ike iji oke ebili mmiri ahụ mee ihe, a ga-emecha kpochapụ gị n'oge ọhụụ."
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, site na nnukwu data, ọgụgụ isi, na Internetntanetị, North Korea na United States ejirila ịnụ ọkụ n'obi zaa oku mba ahụ maka mmelite mma, mgbanwe mgbanwe teknụzụ, gbasaa mpaghara ọrụ ngwaahịa, yana ọwa ahịa agbasawanye. Taa, Chaomei nwere klas nyocha mbụ, ụlọ ọrụ R&D na ebe e-commerce nọ n'ụlọ na mba ofesi. Companylọ ọrụ ahụ na-amalite ma na-emepụta ngwaahịa nke ihe karịrị ụdị 100 na nkọwapụta na usoro abụọ nke nchebe iku ume na ịsa ahụ kemịkalụ kwa ụbọchị, wee nweta ihe mepụtara 4 na patentị bara uru 35. Ọnụ ego a na-emepụta kwa afọ rịrị elu site na yuan 3 na 2000 ruo ihe karịrị yuan 200.
North Korea na United States Intanet nke Ihe Njikwa Ihe
Dabere na Lin Jinxiang, usoro ọrụ IoT ahụ nyere ọrụ ọhụrụ na itinye n'ọrụ ga-enyere North Korea na United States aka ịkwalite nrụpụta arụmọrụ, meziwanye ngwaahịa dị mma, ma na-ebute ụzọ n'inweta njikwa na nlele anya site na ị nweta ngwaahịa, imepụta ahịa. "China bụ nnukwu mba na-emepụta ihe, mana na afọ ndị na-adịbeghị anya, ma mba ụwa na ụlọ ụlọ etinyela ihe ndị dị elu na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe. Na njedebe nke ngụkọta nke igwe mmadụ na uru ọnụ ahịa, ụdị uto ọdịnala nke ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe enweghị nkwado. ga-adabere na teknụzụ Nwepụta ihe iji dozie nsogbu ma bulie asọmpi anyị. "
Abịa n’ihe nketa ụlọ ọrụ, Lin Jinxiang nwere nghọta nke aka ya, “Ihe nketa abụghị naanị ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ ka ụmụaka hapụ ijikwa, kama dịka onye okpu ọka nwere ahụmahụ ka ọ dụọ ha ọdụ banyere mkpebi ha dị mkpa ma mee ka mgbanwe nke ụlọ ọrụ ahụ were were. Hapu ya umu agboghobia. Companieslọ ọrụ ndị tozuru etozu nwere ike ime ihe na-erughị naanị ịnọ ha nso oge niile. "
Dị ka ọ na-atụ anya ya, mgbakwunye nke "ọgbọ nke abụọ" enyela ohere mmepe na ihe nketa nke mmụọ Korea-American, ma tinyekwa ume ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ. Diọkpara Lin Jinxiang, Lin Yanwei, bụzi onye nnọchi anya Hangzhou Municipal People's Congress na osote onye isi oche nke Jiande City Federation of Industry and Commerce. Ndị Zhejiang Safety and Health Protection Products Industry Association kwadoro ya ka ọ bụrụ onye njikwa ọkachamara pụrụ iche nke mpaghara Zhejiang ma na-ahụ maka ire ngwaahịa na ụlọ ọrụ ahụ. Nwa nwoke nke abụọ, Lin Yanfeng, bụ odeakwụkwọ nke ngalaba otu ụlọ ọrụ ahụ, onye otu ndị otu ọkachamara na ụlọ ọrụ ịnshọransị na mpaghara Zhejiang, yana onye ndu teknụzụ. Ọ bụ ya bụ isi maka mmepụta. Imirikiti nyocha na mmepe na mmelite nke usoro nnwere onwe nke North Korea sitere n'aka ya.
Lin Jinxiang kwuru na mgbe ndụ ya niile nke mkpuchi ọrụ, na o nwekwara ọtụtụ ndị enyi. Inye mkpuchi oru bụ ezigbo azụmaahịa. Na mgbakwunye na ịnweta ego, ọ na-echebekwa ahụike na nchekwa nke ndị ọzọ; obu obu ahia. Mmepụta nke mkpuchi mkpuchi ọrụ kwesịrị ịbụ nke zuru oke ma rube isi na ogo. Mmetụta nke onye ọrụ inshọransị ọrụ a gosipụtara nke ọma na ya. Iji nwee ike ijere ụlọ ọrụ ahụ ozi nke ọma ma kwalite ọganihu nke ụlọ ọrụ ahụ, Lin Jinxiang rụrụ ọrụ dị ka onye isi osote onye isi ụlọ ọrụ mkpuchi mkpuchi ọrụ na China Textile Business Association na onye isi oche nke Zhejiang Safety and Health Protection Products Industry Association, isetịpụ ezi ihe nlereanya na iji obi dum na-ejere ụlọ ọrụ ịnshọransị ọrụ ike.
"Echefula ebumnuche mbụ ahụ, na-aga n'ihu, na-esokwa nnọkọ ahụ mgbe niile." Lin Jinxiang na-akwalite mgbanwe na mmepe nke ụlọ ọrụ nwere nnukwu ụlọ otu; ọfiọkde "Mere na Zhejiang" na elu-edu enterprise development; na-agbada n'ichepụta ọgụgụ isi dị elu ma na-akwalite "amamihe na United States". N'ịgbalite ọhụụ nke onwe na njikarịcha usoro dị ugbu a, North Korea na United States na-aga n'ihu na njem ọhụrụ nke iwulite akara mkpuchi mkpuchi ọrụ mba, na-egosipụta nnukwu ọrụ ha, ma na-enyekwu aka na ahụike ndị ọrụ nke ndị ọrụ China!
Obodo Shangshan, Yangcunqiao Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China